Zuza imali eyongezelelweyo: izimvo zokufumana imali eyongezelelweyo ekupheleni kwenyanga | Ezezimali
Namhlanje abona banethamsanqa banomvuzo othi, ekupheleni kwenyanga, bafikelele kwiiakhawunti zabo abanokuthenga ngazo ukutya kwaye benze ubomi obaneleyo okanye obuncinci. Nangona kunjalo, ukufumana imali eyongezelelweyo akukhathazi, kwaye uninzi luthatha isigqibo sokuncama elinye lexesha labo lasimahla ukukhetha ubomi obungcono, nokuba kungokufumana okungakumbi ekupheleni kwenyanga, okanye ngokukhangela imisebenzi eliqela eza kubazisela " Umvuzo.
Nangona kunjalo, Uyifumana njani imali eyongezelelweyo? Ngaba ingenziwa "ngokusemthethweni"? Namhlanje siza kukunika ezinye izimvo xa usongeza ekupheleni kwenyanga engasoze ikhathaze mntu.
1 Uyifumana njani imali eyongezelelweyo
1.1 Umsebenzi wesibini
1.2 Yenza iikhosi zakho uzithengise
1.3 Yenza ivenkile yakho online
1.4 Zuza imali eyongezelelweyo: Bhala iincwadi
1.5 Thengisa iifoto
1.6 Zuza imali eyongezelelweyo: umqeqeshi wakho (okanye utitshala)
Uyifumana njani imali eyongezelelweyo
Kuhlala kusithiwa imali ayizisi lonwabo. Kodwa inyani kukuba, nokuba akayiniki, kuba akakuganga ebusuku okanye athethe izinto ezintle kuwe, ukongeza ekubeni ungenazimvakalelo; inyani kukuba iyanceda kakhulu. Kwaye kukuba namhlanje uluntu lulawulwa yimali. Ukuba unayo unako zinike iminqweno oyifunayo, okanye ubuncinci uphile ngendlela ekhululekileyo nezolileyo, Nokuba uyayigcina; Ukuba awunayo, kuya kufuneka ujinge ukuze uziphilise.
Ke ngoko, ukufumana imali eyongezelelweyo yinto uninzi lwabhalisela yona, ngakumbi ukuba awunyanzelekanga ukuba uyisebenzele nzima. Kodwa, zeziphi iindlela onokukhetha ukuziphumeza? Apha sithetha ngezinye zazo.
Khawufane ucinge ukuba unomsebenzi womnye umntu. Usebenza ishedyuli efanelekileyo kwaye uneeyure ezimbalwa zasimahla ozinikezela kuwe. Kodwa, Ungathini xa ungakuxelela ukuba ungakhangela omnye umsebenzi? Uninzi lucinga ukuba oku kuthetha ukuba neeshedyuli ezimbini, kodwa akufuneki kube njalo.
Ngokukodwa, sithetha ngomsebenzi wokuzimela. Kwaye kunjalo Nokuba usebenzela omnye umntu, ungabhalisa njengomntu ozisebenzelayo. Ewe awunakuba sisikhundla esizimeleyo ngokusisigxina. Kodwa oko kunenzuzo eyongeziweyo: awuyihlawuli yonke imali abayifunayo kuwe.
Umzekelo, ukuba usebenza kwiofisi yolawulo kusasa, kutheni unganikezeli ngeenkonzo zakho njengomphathi emva kwemini? Okanye unomnye umsebenzi onxulumene nento oyithandayo? Ewe kunokwenzeka, kwaye nangona oko kuya kuthatha iiyure zokuphumla kunye nokuqhawulwa, iqhinga kukukhetha umsebenzi owonwabisa kwaye ungadinwa. Ukufumana imali eyongezelelweyo kuya kuba mnandi ngakumbi kwaye kunomvuzo.
Yenza iikhosi zakho uzithengise
Ukuba uyakwazi ukubhala okanye ukurekhoda iividiyo, kutheni ungazenzi imali? Injongo kukuba yenza iphepha apho uthengisa khona izifundo zakho. Umzekelo, into enxulumene nomsebenzi wakho. Izifundo, okanye izihloko ezinxulumene ngokusondeleyo nentengiso yedijithali ngumyalelo wosuku. Kodwa nazo ziyinxalenye yemihla ngemihla.
Umzekelo, kuthekani ngokunceda abantu ukulungisa umatshini wokuhlamba? Ukuba ulungile kuyo, ngokuqinisekileyo uya kubakho amaqhinga amaninzi owaziyo kwaye abantu baya kukulungela ukuzifunda (kwaye ke oko kuya kukunceda kwezemali).
Ukwenza oku, eyona nto intle kukuba wenza iividiyo ezisemgangathweni kunye nee-ajenda ezifanelekileyo oza kuthi ufumane ezongezelelweyo ekupheleni kwenyanga.
Yenza ivenkile yakho online
Abasebenzi abaninzi bagqibe kwelokuba, ukongeza kwimisebenzi yabo, bafuna ukuqala ishishini. Kwaye ngayo Benza ivenkile ekwi-Intanethi engabizi kakhulu, ngakumbi ukuba unolwazi ngayo kwaye uyakwazi ukuyinxiba. Kwaye uza kuthengisa ntoni? Ewe, nantsi indidi enkulu, kuba ungacinga ngokuthengisa phantse yonke into. Nokuba ulungelelene kwinto ethile, njengokwenza iisepha ezenziwe ekhaya, iibroshi, ubucwebe ... unokukhuthaza ukuthengiswa kweziqwenga ezizodwa nezenziwe ngezandla (ngoku ezinemfashini).
Kwakhona, ayizukuthatha thuba lide kwaye uzakufumana olongezelelweyo.
Zuza imali eyongezelelweyo: Bhala iincwadi
Ewe, siyazi ukuba namhlanje akukho baninzi abafundi. Kwaye kufuneka uthathe ingqalelo ubuqhetseba, obutshabalalisa umvuzo wababhali nayo yonke imigudu abayenzileyo. Kwaye kukuba, nangona umbhali angathatha phakathi kwenyanga enye kunye nonyaka omnye ukubhala inoveli, enikezela iiyure yonke imihla, emva koko oko akufumanayo kwincwadi nganye kubuhlungu, yiyo loo nto kufuneka bathengise kakhulu (kwaye ubuqhetseba abenzi njalo. Uncedo lokubuyisa utyalo-mali olwenziwe).
Nangona kunjalo, yindlela yokufumana imali eyongezelelweyo ngaphandle kokuba kufuneka utyale imali. Konke okufuneka ukwenze ukubhala inoveli kwaye ke, ukuba awufuni kuchitha nantoni na, yilayishe kwiAmazon okanye kwelinye iqonga lokushicilela simahla ukuqala ukuthengisa. Ewe uyakufuna ukuyishukumisa kancinci ukuze abantu bazi kwaye bakunike ithuba. Kodwa ukuba uphumelele, abapapashi banokukuqaphela.
Ukuba ukhona ndiyazithanda iifoto kwaye uyathanda ukuthatha ikhamera yakho kwaye ubambe iimeko, iimvakalelo… uyazi ukuba ungazithengisa iifoto zakho kwi-Intanethi? Okwangoku le nkonzo ifunwa kakhulu, hayi eSpain kuphela, kodwa kwihlabathi liphela. Kwaye yeyokuba ukubonisa umxholo wedijithali, iifoto zibalulekile.
Ke unokwenza ipotifoliyo yeefoto kwaye uzilayishe kumaqonga apho kudweliswe khona iifoto. Kwinto nganye abayithenga kuwe, baya kukunika imali. Ewe kunjalo, ekuqaleni kuya kuba kuncinci, kodwa ukuba ugcina umgangatho olungileyo, ngubani owaziyo? Mhlawumbi uqala ukuthengisa ngakumbi okanye iimveliso ziyakuqaphela ukuze ube yingcali kwinkampani yabo.
Zuza imali eyongezelelweyo: umqeqeshi wakho (okanye utitshala)
Ukuba ulungile kwezemidlalo, okanye nasiphi na isifundo, uyazi ukuba ootitshala abakwi-Intanethi bayenyuka? Yindlela yokufundisa ngokusebenzisa itekhnoloji entsha, ekhuthaza ngakumbi nangakumbi abantu. Ukuba uyasazi isiNgesi, ukuba unenkuni njengomqeqeshi wobuqu, okanye ukuba kukho isifundo osazi kakuhle, kutheni ungazuzi?
Ngaba unokwenza ifayile «Isikolo esikwi-Intanethi» apho unika khona iiklasi ezibonakalayo, nokuba ngumntu omnye okanye iqela elincinci, ukubanceda ngomsebenzi wesikolo, ukulungiselela iimviwo, okanye ukubafundisa isifundo esiphikisayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Ukulondoloza » Ukuphela kwenyanga » Fumana imali eyongezelelweyo
Abona bantu bazizityebi emhlabeni